शारीरिक बीमा:यो तपाईंको पुर्जा बीमा भावलाई पार्छ?
शारीरिक बीमा: यो तपाईंको पुर्जा बीमा भावलाई पार्छ?
Bhose June 17, 20132013-06-17T06:02:16+00:002015-04-06T12:21:47+00:00 General, जीवन बीमा
के तपाईं कहिल्यै आफ्नो शरीरका बीमा सोचा छ? यस नाइजेरिया अझै सिद्ध गर्न नसकिए तापनि, यो लोकप्रिय Juju संगीतकार भनेर अफवाह छ, राजा सनी Ade, यी औंलाहरु केही dismemberment को मामला मा Naira को विशाल लाखौं लागि आफ्नो गिटार-तोड औंलाहरु बीमा. किन यो छ? यो Juju प्रतिभाशाली नाइजेरिया सबैभन्दा dexterous गिटार-खेल संगीतकार को रूपमा जानिन्छ किनभने यो छ, र आवर्तक र SYMPHONIC गिटार उपभेदों Juju संगीत को आफ्नो ब्रान्ड हावी. विदेशी दृश्य मा, देश संगीत को busty रानी, डली Parton लाखौं डलर लागि उनको ठूलो bosoms बीमा गरेको रेकर्ड छ; यसैबीच, जीन सिम्मोंस, लोपेज, र धेरै अन्य सेलिब्रिटीज बीच माइकल Flatley आफ्नो खुट्टा बीमा छन् जानिन्छ, bums, नाक, बीमा नीतिहरू ठूलो रकम लागि र अन्य "अघिल्लो र बहुमूल्य" शरीरका.
किन यो छ? कारण टाढा-तानियो छैन. यी बीमा शरीरका, यी सेलिब्रिटीज गर्न, आफ्नो आय स्रोत र आफ्नो सेलिब्रिटी स्थितिहरु को मुख्य ब्रान्ड हो. यी सेलिब्रिटीज यी शरीरका लागि कुनै पनि क्षति वा क्षति राम्रो आय उत्पन्न गर्ने क्षमता कमजोर भनेर बुझ्न, र तिनीहरूले त्यसैले चाँडै तिनीहरूलाई लागि डर बाहिर यी शरीरका बीमा, ताकि बीमा compensations कारण यी शरीरका लागि आय को कुनै पनि हानि लागि कवर सक्छ. तपाईं एक नाइजेरियाली हो भने राम्रो यस बुझ्न, Cossy Orjiakor उनको विशाल स्तन बिना कस्तो हुने? उनको विशाल bosoms एक नाइजेरियाली सेलिब्रिटी अभिनेत्री र कलाकारको रूपमा उनको ब्रान्ड र बिक्री बुँदे छन्; त्यसैले यो तिनको ठूलो bosoms भइ केहि डर लागि बुझन सकिन्छ, र त्यो ती उनको सम्पत्ति र बजार ब्रान्ड नाइजेरियामा चलचित्र दृश्यहरु मा हो किनभने तिनीहरूलाई बीमा निर्णय भने.
अब, तपाईं आफ्नो शरीरका बीमा लागि एक सेलिब्रिटी छैनन् भने यो कुनै पनि अर्थमा गर्छ? सत्य यो गर्न कुनै भावना सानो गराउँछ, तपाईं ड्राइभर रूपमा राम्रो ठाँउहरु मा निर्भर तापनि; एक कम्प्युटर प्रोग्रामर रूपमा आफ्नो औंलाहरु; एक मोडेल र असल खुट्टा. कदापि पनि आफ्नो शरीरका बीमा गर्न इच्छुक हुनेछ कुनै पनि बीमा कम्पनी पाउन तपाईं सक्षम हुनेछ, संयुक्त राज्य मा केही बाहेक. तपाईं विश्वव्यापी सेलिब्रिटी र धेरै धनी छन् बाहेक आफ्नो शरीरका बीमा धेरै महंगा हुन सक्छ; तर पनि उत्तिकै धेरै राम्रो विकल्प छन्.
यो आफ्नो भविष्य लगानी र अवकाश आवश्यकताअनुसार पूरा हुनेछ किनभने तपाईं जीवन बिमा लागि जान सक्छ, र पनि आफ्नो निधन पछि आफ्नो परिवार आवश्यकताअनुसार पूरा हुनेछ. तर तपाईं जीवन बीमा को ध्वनि रुचि छैन भने, तपाईं कार्यस्थल वा कारखाना दुर्घटना लागि ढाकेका छन् जसबाट त तपाईं कार्यस्थल विकलांगता बीमा रोज्न सक्छन्. एक कार्यस्थल असक्षमता वा dismemberment बीमा संग, तपाईं काम को पाठ्यक्रम मा आफ्नो अंग वा बिर्सनु भने तपाईं क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ. यो आफ्नो शरीरका बीमा गर्न अधिक किफायती र एक राम्रो विकल्प छ, तपाईं धेरै धनी छन् र जब सम्म यस्तो बीमा शरीरका आफ्नो सम्पत्ति र ब्रान्ड एक सेलिब्रिटी रूपमा छन्.
Maximize Cheap and Affordable Insurance for Quality Coverage
घर र सम्पत्ति बीमा: गुण र तपाईं को लागि वहन नीति